यी हुन नेपालकै पहिलो लोक स्टार ! – सजल सन्देश
यी हुन नेपालकै पहिलो लोक स्टार !
By Sajal sandesh	 On९ कार्तिक २०७६, शनिबार ०१:५२
काठमाडौँ – नेपाल लोक स्टारको प्रतिस्पर्धीको हिजो साझ फाईनल भएको छ । लोक गायन रियालिटी शो ‘नेपाल लोक स्टार’ को पहिलो विजेता रोल्पाका शनि विश्वकर्मा बन्न सफल भएका छन् । सोनी विश्वकर्मा र राम नेपालीको कडा प्रतिस्प्राधा भएको थियो ।
सोनी विस्वकर्मा आम नेपालि च्वाइसमा भोट लिएर बिजेता हुनु भएको छ । भखरै मात्र सकिएको लोक स्टारले यस वर्षको कार्यक्रम सकेको छ । अर्को वर्ष फेरी सो हुने जानकारी गरेका छन् । विश्वकर्माले ५० लाख रुपैयाँको पुरस्कार हात पारेका छन् । यसका साथै उनले २५ लाख रुपैयाँ बराबरको जीवन बीमा पनि हात पारेको हुन् । यस्तै स्याङ्जाका चेतन गोतामे लोकस्टारको दोस्रो बन्न सफल भएका छन् ।
उनी २५ लाख रुपैयाँ पुरस्कार र १५ लाख बराबरको जीवन बीमा पाउन सफल भएका छन् । उदयपुरका विनोद दनुवारले तेस्रो स्थान हात ओगटेका छन् । उनले १० लाख रुपैयाँ नगद पुरस्कारका साथै १० लाख रुपैयाँ बराबरकै जीवन बीमा हात पारेका हुन् । यस्तै रामकुमार नेपालीले इलेक्ट्रिफाइङ्ग पर्फर्मेन्स अवार्ड हात पार्न सफल भए । उनले लिट्मस केबलको तर्फबाट २ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेका छन् ।
उनाीहरुलाई शनिबार दिउँसो १२ बजेबाट शुक्रबार दिउँसो १२ बजेसम्म पाएको भोटको आधारमा विजेता घोषित गरिएको छ । अडिसनदेखि विभिन्न राउण्डहरु पार गर्दै नेपाल लोक स्टारको ग्राण्ड फिनालेमा ४ प्रतिस्पर्धी पुग्न सफल भएका थिए । सोनीको गाउमा खुसियाली छायाएको छ ।
आज काग तिहार !
लक्ष्मीमातालाई खुसी पार्न तिहारमा चढाउनुहोस् यी पाँच चीज